Mfutshane Phendula iIcebiso kwiSicelo esiQhelileyo
Nangona iSicelo esiQhelileyo asifunanga iincwadana ezimfutshane zempendulo, iikholeji ezininzi zibandakanya umbuzo ngale ndlela: "Sichaza ngokufutshane kwenye yezinto zakho zangaphandle okanye amava omsebenzi." Impendulo emfutshane ihlala isongezwa kwisicatshulwa somntu siqu .
Nangona lifutshane, eli ncoko elincinci lingadlala indima ebalulekileyo kwisicelo sakho. Yindawo apho unokuchaza isizathu sokuba enye yemisebenzi yakho ibaluleke kuwe. Inika iwindow encinci kwiminqweno yakho kunye nobuntu, kwaye ngenxa yoko, kunokubaluleka xa ikholeji inomgaqo- nkqubo wokungeniswa jikelele . Iingcebiso ezingezantsi zinokukunceda wenze oku kuninzi kwesi siqendu esifutshane.
Khetha i-Activity efanelekileyo
Kungaba nzima ukukhetha umsebenzi ngenxa yokuba ucinga ukuba ufuna enye inkcazo. Unokuba ukhathazekile ukuba inkcazo enye yenkcazo kwinqanaba le- extracurricular leSicelo esisodwa ayicaci. Nangona kunjalo, Impendulo emfutshane akufanele ijongwe njengendawo yokucacisa. Kufanele ugxininise kwimisebenzi yesikhathi eside ebonisa ukuba kuninzi kuwe. Amagosa angenayo avumayo ufuna ukubona oko kukukhatyayo. Sebenzisa le ndawo ukucacisa ukuthanda kwakho, nokuba udlala i-chess, ukubhukuda okanye usebenze kwi-bookstore yangaphakathi.
Imisebenzi emihle yexesha eliqhelekileyo yiloo nto ithetha ukuba uninzi kuwe , kungekhona ocinga ukuba iya kubakholisa kakhulu abantu abamkelweyo.
Chaza ukuba Kutheni uMsebenzi ubalulekile kuwe
I-prompt isebenzisa igama elithi "elibanzi." Qaphela ukuba usichaza eli gama. Ufuna ukwenza okungaphezulu kokuchaza umsebenzi. Kufuneka uhlaziye umsebenzi. Kutheni kubalulekile kuwe? Ngokomzekelo, ukuba usebenze kwiprojekti yezopolitiko, akufanele ukuchaza ngokucacileyo ukuba yeyiphi imisebenzi yakho. Ufanele uchaze ukuba kutheni ukholelwa kulo phulo. Xoxa ngendlela imbono yezopolitiko yomviwa edibanisa ngayo iinkolelo zakho neempawu zakho. Injongo yinyani yeMpendulo emfutshane ayilona amagosa avumelekileyo ukuba afunde kabanzi malunga nomsebenzi; kukuba ukuba bafunde kabanzi ngawe. Ngokomzekelo, impendulo ka-Christie imfutshane yenza umsebenzi omkhulu obonisa ukuba kutheni ukubaluleka kubalulekile kuye.
Yiba neNgcaciso kunye neenkcukacha
Naliphi na umsebenzi okhe ukhetha ukucacisa, qiniseka ukuba uyifaka ngeenkcukacha ezichanekileyo. Ukuba uchaza umsebenzi wakho ngolwimi olungacacanga kunye neenkcukacha zendalo, uya kukwazi ukubamba ukuba kutheni unomdla malunga nomsebenzi. Musa ukuthi nje uthanda umcimbi kuba "uyonwabile" okanye kuba kukunceda ngezakhono ongazifumananga. Zibuze ukuba kutheni kumnandi okanye kukuvuza - uyayithanda inxaxheba, inselele yengqondo, ukuhamba, ukuvalelwa komzimba?
Yenza Yonke Inombolo Bala
Umda wokude ungahluka ukusuka kwisikolo esinye kuya kwesinye, kodwa amagama angama-150 ukuya kuma-250 aqhelekileyo, kwaye ezinye izikolo zihamba zifutshane kwaye zicela amagama angama-100. Oku akukho indawo eninzi, ngoko ufuna ukukhetha onke amagama ngokucophelela. Impendulo emfutshane imele ibe yinkcazo kwaye ibe yinto emfutshane. Awunayo indawo yokubamba amagama, ukuphindaphinda, ukuchithwa, ulwimi olungacacileyo, okanye ulwimi oluthambileyo. Kufuneka usebenzise ezininzi zeendawo owanikwa zona. Impendulo yegama elingama-80 ihluleka ukusebenzisa ngokufanelekileyo eli thuba ukuxelela abantu abamkeleyo malunga nentshisekelo yakho. Ukuze ufumane uninzi lwamagama akho angama-150, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba isitayela sakho sinqanda iifolo eziqhelekileyo . Inqaku elifutshane eliphendulayo likaGwen linikeza umzekelo wempendulo echazwe ngokuphindaphinda nokuthetha okungaqhelekanga.
Ukubetha Ilungelo elaneleyo
Ithoni yempendulo yakho emfutshane ingaba yingozi okanye idlala, kodwa ufuna ukuphepha iimpazamo eziqhelekileyo. Ukuba impendulo yakho emfutshane inomxholo omile, umcimbi-we-fact, ukuthanda kwakho umsebenzi akuyi kufumana. Zama ukubhala ngamandla. Kwakhona, qaphele ukukhala ngathi njengeqhayiya okanye umzekelo. Impendulo emfutshane kaDoug igxininise kwisihloko esithembisayo, kodwa ithoni yesincoko inokuthi ibe nempembelelo embi kunye nabantu abangenayo.
Ngokuqhelekileyo kulula ukuxelela ukuba umenzi wesicelo udala into engamanga ngenzame yokumangalisa amagosa avumelekileyo. Musa ukubhala ngomsebenzi wakho kwibandla lokuxhaswa ngecawa ukuba ukunyaniseka kwakho okwenene kuyinqola yebhola. Ikholejini ayiyi kumkela umntu nje ngokuba umfundi uyayenza kakuhle. Baza kuvuma abafundi ababonisa intshukumo, intshiseko kunye nokunyaniseka.
Ixesha elide kufuneka ukuba isicelo sakho esifanelekileyo siphendule njani Umbuzo?
I-Ideal College I-Essay Application Ubude
Iingcebiso zokubhalwa kweNqaku lokuTshintshela kweKholeji
Iingcebiso zokubhala i-Essential College Essay Application
Isongezelelo seKholeji yeeKholeji
"I-Handiwork" -Sampula yoLwazi lweNkcukacha zoLuntu oluKhethekileyo kwiNketho # 1
I-VB.NET ye-Logical Operators kunye ne-OrElse
Ubudlelwane boLimo kwiZiko eziLungeleleneyo
20 Impopasho yePapa yeNdabuko kunye neMeme ye-Halloween Inspired Costumes Kubadala
Izizathu ezi-5 zokuba i-Wakeboardsers kufuneka ihlole ukuthenga i-PWC
Isikhokelo esigqibeleleyo kwisihlahla soNtsapho yaseKiriakis
Ulwahlulo loLuntu kwiNtswelo yezeMpilo luye lwachaphazela njani abaNcinane kwiMinyaka
Indlela Yokuqalisa Umsebenzi Ekusebenzeni
Hooray kuDkt. Seuss! - Ubomi obufutshane
Indlela Yokufumana Izandiso Zemigangatho Ephakamileyo Ekudleni
5 Iingcamango ezilula zokucobisa i-Ostara
Ukuxilongwa kweNyathelo-ngeNyathelo -Nokuthi "UkuBonakala" (ukuBonakala)
Amancinci amancinci kwiBass
Ukutshintshwa kwenkcazo Inkcazo
Funda indlela yokudibanisa "Product" (Ukuvelisa)
Okuthethwa yiKur'an malunga neSayensi kunye neNyaniso
Iingcebiso ezi-5 ze-Time Massive Drop kunye ne-Quickest Freestyle
Romeo: uShakespeare's Character Famous
Ukubhala iPortfolio (Ubume)
Ukunganiseki kunye ne-Haplology kwi-Phonetics